Amiraly Radavidson Abel : « fanitsakitsahana ny Tafika ny fampidirana ny FAZSOI» (+vidéos) | Site officiel du collectif GTT Gasy Tia Tanindrazana
Amiraly Radavidson Abel : « fanitsakitsahana ny Tafika ny fampidirana ny FAZSOI» (+vidéos)
« Tsy tokony atao izay mahakivy ireo miaramila manao vy very ny ainy any atsimo » hoy ny Amiraly Radavidson. Nomarihiny fa tsy fotoana fitondrana fanakianana sy fitsikerana be fahatany ny fotoana iatrehana ady. Raha mikorotana mantsy ny sain’ireo miaramila ireo dia efa resy amin’ny antsasany sahady izy ireo. Notsorin’ity manamboninahitra ambony ity fa na ny tenany aza manana ho kianina betsaka amin’ny fitantanana ao anatin’ny Tafika saingy « aleo aloha vita ny ady vao miteny ».
Raha ny fahitany azy mantsy dia mahay ny tetikady rehetra ho entina miady ara-miaramila ity dahalo ity ka an-kasarotana ny iraka ataon’ireo any an-toerana. Ilaina ny fanampian’ny rehetra arak’izany ny fiatrehana ireto « fahavalom-pirenena » ireto fa tsy ny fifampitsikerana no atao mialoha. Nokianiny kosa ny tsy fisian’ny vaomieran’ny fifandraisana sy ny serasera eo anivon’ny tafika tokony hampita ny vaovao marina amin’ny vahoaka satria zon’ny olom-pirenena Malagasy rehetra ny mahalala na dia ny am-pahany kely indrindra tokony ho fantatra fotsiny aza.
Noho izay tsy fisian’ny serasera sy ny fampitam-baovao marina izay dia mandeha ny resaka fa maro amin’ireo zandary sy miaramila nifanandrina voalohany tamin’i Remenabila no nitsoaka an-daharana ary tsy niverina tany anaty toby intsony. Mitondra vahaolana ny Amiraly Radavidson :
Mikasika ny fepetra tokony ho raisina amin’ity « dahalo » ity dia nambaran’ny Amiraly Abel Radavidson fa « ireo miatrika ady any an-toerana ihany no mahalala ny zava-misy marina ka afaka manapa-kevitra hanao sambo-belona an’ireo dahalo na tsia ». Tsy tokony hisy arak’izany ny baiko an-tsisiny izay mety hanakorontana ny asan’ny miaramila miatrika ady. Nisy tokoa manko ny manamboninahitra efa ministry ny fiaorvana teo aloha no manambany ny asan’ireo miaramila any an-toerana amin’izao fotoana izao.
Fanamby lehibe no nataon’ity manamboninahitra ity mikasika ny filazana fa mampiasa ody tsy andairam-bala ireto dahalo ireto. « Mba tiako sedraina ny fahamarinan’izany ody tsy andairam-bala izany hoy izy satria raha ny lafiny teknika dia tsy mitombona velively izany ».
Miaramila frantsay …
Araka ny siosion-dresaka hatrany dia tonga androany eto an-tanindrazana ireo miaramila avy amin’ny FAZSOI hanampy ny miaramila Malagasy miatrika an-dRemenabila. Notsipahin’ity manamboninahitra ity ny fanaovana izany raha mitombona ny vaovao. « Manana ny fahaiza-manao ny miaramila Malagasy » hoy ny Amiraly « ka tsy tokony halaina baraka toy izany ». Nomarihiny moa fa raha ny fahalalany dia tsy ao anatin’ny fifanaraham-piaraHa-miasa eo amin’ny Tafika Malagasy sy frantsay izany fandefasana olona hiara-miady izany. Ny fahavalo rahateo tsy avy any ivelany fa mpangalatra omby tera-tany.